Uwe ojii Apple's French webụsaịtị na-eru uju | Esi m mac
Mgbe ihe ndị ahụ na-adịghị mma na ngwụcha izu a gbasara mmegide na isi obodo France, Apple ekpebie ịkwụ obere ụtụ dị ka ihe ncheta na weebụsaịtị gị iji zipu n'ụzọ ụfọdụ iru újú ya na ndị ikwu na-emetụta ndị a egwu omume.
E wezụga nke ahụ, ọ ga-ekwukwa na Google etinyelakwa oji ojii na ibe weebụ nke njin ọchụchọ ya dịka ihe ncheta. O doro anya na ụwa dum na-awụ akpata oyi n'ahụ maka ihe mere ụbọchị ole na ole gara aga, mana ọ bụghị naanị na omume ndị emere na ebe nke ihe ndị ahụ mere, mana gafere ihe mgbochi teknụzụ ịhapụ akara ha ma echefula na anyị niile ndị hụrụ ndụ n'anya ma na-agba mbọ iji kwado ọchịchị onye kwuo uche ya nọ n'otu akụkụ.
N'aka nke ha, ụfọdụ ndị ọrụ Apple akpọkwara ndị ọrụ niile nke Apple Store na ọfịs ha na France ịjụ maka ọkwa ha, lelee na onye obula di mma ọ dịghịkwa onye merụrụ ahụ maka mwakpo ndị ahụ.
N'aka nke ọzọ, Apple CEO Tim Cook O gosiputara mwute ya maka ndị a wakporo ọgụ Paris na okwu ndị a:
Ọ dị mma ịhụ ndị dike dị iche iche na teknụzụ ka ha gbakọtara iji gosipụta ịdị n'otu dị n'etiti mba dị iche iche nke ụwa.
Ọ dị mwute ịhụ ka isi obodo dịka Paris si mikpuo n'ime mmiri erughị otu afọ gara aga Na ụfọdụ jọgburu onwe kosher nnukwu ụlọ ahịa bombings na mbipụta Charlie Hebdo, weghachite obi ojoo a ozo.
Olileanya na nke a agaghị eme ọzọ nakwa na ọ bụ oge ikpeazụ anyị ga-ahụ mgbuchapụ dị ka nke a nakwa na ma Google ma ọ bụ Apple ma ọ bụ ndị ahụ dị iche iche, ga-eyi uwe na-eru uju maka ihe ọ bụla metụtara ụdị ihe omume a ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple si French website na-eji ejiji na iru uju na nwa crepe na mkpuchi ya
Dowe Mac gị n’ụdị na Onyx 3.1.2 maka OS X El Capitan